महाशिवरात्रीमा पशुपति मन्दिर बिहानदेखि बेलुकीसम्म खुल्ने - नेपालबहस
महाशिवरात्रीमा पशुपति मन्दिर बिहानदेखि बेलुकीसम्म खुल्ने
| १९:४०:४७ मा प्रकाशित
१६ फागुन, काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिर महाशिवरात्रीदेखि साविक अनुसार नै दर्शनार्थीका लागि बिहान ६ बजेदेखि बेलुकीसम्म खुला गरिने भएको छ । गत वर्ष चैत ११ गते कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी जारी गरेपछि नौ महिनासम्म मन्दिर दर्शनार्थीका लागि पूर्णरुपमा बन्द गरिएको थियो ।
पुष १ गतेदेखि बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको पश्चिम ढोकामात्र खुला गरी दुई वटा लाइनबाट भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर दर्शन गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । महाशिवरात्रीदेखि पशुपतिका चारै ढोका खोल्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
गत वर्ष चैत ११ गते अघिसम्म मन्दिर बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म खुला गरिन्थ्यो । दिउँसो पशुपतिनाथलाई भोग लगाएपछि भने बेलुकी ५ बजेसम्म मूल मन्दिर बन्द गर्ने परम्परा छ । महाशिवरात्रीदेखि यही परम्परा अनुसार गर्ने गरी तयारी शुरु भएको कोषले जनाएको छ ।
कोरोना महामारी जारी नै रहे पनि यस वर्ष पशुपतिनाथ मन्दिरमा आउनेजति भक्तजनलाई दर्शन गराउने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयारी शुरु गरेको छ । तयारीका लागि आज कोषका महाशाखा एवम् शाखा प्रमुखबीच छलफल गरिएको निर्देशक भोलाप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । गत बुधबार पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमुनिको पीठिकामा सुनको जलहरी राखिएकाले पनि यस वर्ष महाशिवरात्रीमा धेरै भक्तजन आउने अनुमान कोषले गरेको छ ।
महाशिवरात्रीको तयारीका लागि सुरक्षा निकायसँग कोषले छलफल गरिरहेको जनाएको छ । यस वर्ष कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले महाशिवरात्रीमा पशुपति क्षेत्र आउने भक्तजनका लागि मास्क र स्यानिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ । भौतिक दूरी कायम गराउन असहज हुने देखिएपनि स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाउन कोषले भक्तजनसँग आह्वान गरेको सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले बताए। महाशिवरात्रीका दिन भक्तजनलाई विगत वर्षहरूमा जस्तै चार स्थानबाट लाइन लगाएर सहज रुपमा दर्शनको व्यवस्था गराइने छ । मूल मन्दिरभित्र भने भौतिक दूरी कायम गराइने उनले बताए।
विभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर स्थापनाको तयारी भएको छ । गुठी संस्थानसँगको सहकार्यमा महाशिवरात्रीमा पुशपति आउने साधुसन्तलाई खाने, बस्ने, धुनी जगाउनेलगायत व्यवस्थापन पनि गरिँदैछ । दर्शनार्थीलाई सहज रुपमा चन्दन बाँड्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
महाशिवरात्रीदेखि रसिद काटेर गरिने विशेष पूजा पनि शुरु गर्ने तयारी गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले बताए । कोरोना महामारीका कारण विशेष पूजा गत वर्ष चैतदेखि नै बन्द भएको थियो । कोषको नेतृत्वमा तामझाम नगरी आएका भक्तजनलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर दर्शन गराउने तयारी गरिएको पनि उनले बताए ।
चितवनमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु ५२ मिनेट पहिले
भारतमा संक्रमणमा दैनिक नयाँ रेकर्ड, दिल्लीमा मात्रै १३ हजारको मृत्यु ४ घण्टा पहिले
कोभिड खोप लगाएका र पहिले पनि संक्रमण देखिएका वीर अस्पतालका १५ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित २ मिनेट पहिले
बिरामीका लागि कर्णालीमा एम्बुलेन्स र हेलिकोप्टर व्यवस्था ४ मिनेट पहिले
भेषभूषामा सजिएका आमा समूह ७ मिनेट पहिले
गोरखामा नगद चोरी गरी फरार युवक पक्राउ ११ मिनेट पहिले
दुधौलीका तीन वडा एक हप्ताका लागि बन्द १५ मिनेट पहिले
फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ १८ मिनेट पहिले
२४ वर्षपछि सडक कालोपत्र हुँदा स्थानीयमा खुशी २० मिनेट पहिले
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आब्हान ३५ मिनेट पहिले
पूर्व सभापति न्यौपानेको निधनमा डा.शेखरद्वारा दुःख व्यक्त ३५ मिनेट पहिले
राजविराज विमानस्थल दुई साताका लागि बन्द ३५ मिनेट पहिले
आज बिहानैदेखि भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्ड अवरुद्ध ३७ मिनेट पहिले
जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको बीचमा पर्ने रिम्ना र चाइना बगर ३८ मिनेट पहिले
पातारासी हिमालको काखमा स्याउ बगैँचा ४२ मिनेट पहिले
बाँकेमा कोरोना बिरामीका लागि शय्या अभाव ४३ मिनेट पहिले
मुस्ताङ र घुन्सामा नागरिक वैशाखमा हिउँ परेपछि दङ्ग १९ घण्टा पहिले
ओली नै विकल्पमा प्रधानमन्त्री ५ घण्टा पहिले
नेपाल र मलेसियाको खेल सुरु, यस्तो छ प्लेइङ–११ २२ घण्टा पहिले
ओलीलाई बामदेवको जवाफ,म तपाईंसँग आउन सक्दिन ४ घण्टा पहिले
धरानमा संक्रमणबाट ४५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु २३ घण्टा पहिले
चट्याङले निसीखोला जलविद्युत् आयोजनामा क्षति ७ दिन पहिले
बाँकेमा गम्भीर बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना २ दिन पहिले
बिशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि २४ घण्टा पहिले
ओलीको जस्तै फण्डा मधेसवादीको ७ दिन पहिले
विराटनगरमा मानव सेवा आश्रमको भवन शिलान्यास २ दिन पहिले
पोखरेलद्वारा रचित पहिलो कृति ‘भजन सुधा’ सार्वजनिक ३ दिन पहिले
डिजिटाइज अभियानमा जुटेको निगमले ल्यायो इआरपी १ हप्ता पहिले
नेपालमा चैत १५ गतेदेखि भेरोसेल खोप लगाइने ३ हप्ता पहिले
विकास बजेट खर्चमा विगतमा देखिने गरेको प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिने २ हप्ता पहिले
एक वर्षमा चीनमा सबैभन्दा धेरै अर्बपति थपिए २ हप्ता पहिले
वीरगञ्जमा कोरोनाबाट ४२ वर्षीया महिलाको मृत्यु १ हप्ता पहिले
ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु २ हप्ता पहिले
राष्ट्रपतिद्वारा भारतीय राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य लाभको कामना ३ हप्ता पहिले
दिल्लीका सरकारी अस्पतालमा ‘मिडिया सेल’ स्थापना गरिने १२ महिना पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? ३ महिना पहिले
ओलीलाई प्रचण्ड–नेपाल समूहले अध्यक्षबाट हटायो ४ महिना पहिले
काभ्रेमा ६२ प्रतिशत घर भूकम्प प्रतिरोधी १० महिना पहिले